Òtù Be Beers mara ọkwa ịmepụta ụlọ ọrụ ọhụrụ nke a na - akpọ Boommaahịa nke ga - amalite ịzụ ahịa ọhụrụ nke ọlaọcha diamond nwere ihe eji eme ihe n'okpuru aha igwe ojii na September 2018, na - enye ndị ahịa ihe dị elu, ihe ejiji ejiji na ọnụ ala karịa onyinye onyinye diamond nwere. Lightbox synthetic diamonds ga mkpọsa ...
Kemgbe mmalite nke May 2018, ugwu ọkụ Kilauea dị na Hawaii amawo jijiji. Nke mbụ, ígwé ojii nke nne na-enwetatụbeghị etu, ugwu ash na égbè gbapụrụ n'elu ugwu Pu'u 'O'o n'elu ugwu ahụ, magma wee kwaga na flanks, na-emepe usoro ihe ọkụkụ na-esi na ebe ugbu a bụ ...
Ọ bụrụ na i jikọtara ibe a, ọ nwere ike ịbụ oge. Tupu ịzụta nkume ma ọ bụ ọla ahịa na Siem Reap, ọ dị mkpa ịgụ ozi dị n'okpuru ebe a. Siem Reap bụ otu n'ime ebe ndị dị n'ụwa ebe e nwere mgbagwoju anya kachasị mma. Dị ka ebe ndị njem nleta, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ihe niile bụ ...
Gemstones N'ogbe: Anwụrụ quartz, garnet, amethyst, Sky Blue Topaz, London Blue Topaz, Citrine, Peridot ... Aaa Quality / Best price Kpọtụrụ anyị maka nkọwa
The Unique Pink 15.38 carat diamond akanyam for $ 31.6 nde
Pink Pink Nke kachasịnụ bụ pink diamond nke dị na Fancy nke dị na Geneva, Pink Pink nke na-ere maka $ 31.6 nde. A ghaghị ịhụ anya nkume dị omimi na acha odo odo na anya gba ọtọ iji chọpụta agba ha, dị ka ihe mbụ anya dị mma bụ ...
Blue Diamond akanyam for $ 58 Nde
Diamond diamond ọhụrụ ụwa A diamond na-acha anụnụ anụnụ na-edekọ ego maka ọla ọ bụla na-ere ahịa mgbe ọ na-aga n'okpuru hammer maka $ 58 nde na a Christie ire na Geneva. A na-atụle The Oppenheimer Blue, na 14.62 carats, dị ka ihe ruru $ 46 nde. Nkume ...
<Previous 1 2 3 4 5 Osote >